Somalia Archives - Page 2 of 3 - Puntland Mirror Believable Media Website
January 9, 2019 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Toban maleeshiyo oo katirsan Al-Shabaab ayaa lagu dilay duqeymo ka dhacay Soomaaliya labadii maalmood ee lasoo dhaafay, sida ay sheegeen ciidamada Mareykanku. Axadii, duqeyn ka dhacday deegaanka Dheerow Sanle ee gobolka Shabeellaha Hoose […]
November 28, 2018 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika Thomas D. Waldhauser ayaa safar ku yimid Muqdisho Talaadadii. Intii lagu guda jiray safarka, Waldhauser ayaa kulan la qaatay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo masuuliyiinta sare ee […]
October 14, 2018 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Midowga Yurub iyo Soomaaliya ayaa maanta saxiixday heshiis €100 million oo taageero miisaaniyadeed ah lagu siinayo Soomaaliya labada sanno iyo barka soo socda. Maaliyadaan ayaa lagu taageeri doonaa dib u habeynta Dowladda Federaalka […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dowladda Soomaaliya ayaa weydiisatay Mareykanka in ay siiyaan “gargaar milatari oo degdeg ah” sababtoo ah dowladda ayaa sheegaysa in Al-Shabaab ay qorshaynayaan sidii ay yuraaniyuum u siin lahaayeen dalka Iran. Warqad ku socota [...]